IHostele ye-MCC ikwindawo esembindini kumgama weemitha ezingama-50 ukusuka kwiSikhululo seeBhasi saseCelje kunye neemitha ezingama-300 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe. Ubugcisa obumnandi kuyo yonke ihostele yimifanekiso ebonakalayo yelifa lenkcubeko yedolophu yaseCelje emele iintsomi kunye namabali esixeko.
Amagumbi eHostele yaseMCC anemihombiso enemixholo kunye nobugcisa. Abanye beza ne-air conditioning, ngelixa zonke iindwendwe zifikelela kwiindawo zokuhlambela ekwabelwana ngazo kunye negumbi lokuphumla elinekhitshi. Kukho 5 umxholo amagumbi kabini ezikhoyo ehostele.
Amabhodlo enkulungwane ye-14 yeCelje Castle inokufikelelwa ngemoto ngemizuzu emi-5. I-Saint Daniel's Cathedral yi-1 km ukusuka kwipropathi kwaye ichibi lase-Šmartinsko elinezixhobo zokuzonwabisa liku-5 km kude.
Inkonzo yokushutha (intlawulo eyongezelelweyo), idesika yokukhenketha, indawo yokugcina imithwalo, iiLokha, Indawo yokuphumla ekwabelwanayo ngayo/iTV, Indawo yokuhlamba impahla, ushicilelo lwebhulukhwe, indawo yentlanganiso/isidlo, ifeksi/ukufotokopa, Ivenkile yezipho
Inkonzo yokushutha (intlawulo eyongezelelweyo), idesika yokukhenketha, indawo yokugcina imithwalo, iiLokha, Indawo yokuphumla ekwabelwanayo ngayo/iTV, Indawo yokuhlamba impahla, us…